Lapho eziningi zokulungisa eziye zenziwa singene «Kala» ifolda, it kaningi ukuthi ingxenye amafayela base ziyashoda. Kuleso simo, uma i add-on izidingo iziphakamiso amafayela, ngeke bakwazi ukubonisa Izikali ephaneleni. Ngokuvamile solution liqukethe ufaka FSX. Ukuze ugweme ufaka FSX, ungalanda ukulinganisa Buyisa, Okuyinto uhlelo kancane owadalwa Rikoooo ukuthi uyobuyisela zonke ifayela original kusukela «Izikali» futhi «Effects» amafolda.
Isibuyekezo 13 / 02 / 2014: A Prepar3d version lecanjwe.